BURMA DEMOCRACY & DEVELOPMENT: ကို ဇာဂါနာမိခင်- ဆရာမကြီး ယုဝတီဒေါ်ကြည်ဦး-ကွယ်လွန်ခြင်း
ကို ဇာဂါနာမိခင်- ဆရာမကြီး ယုဝတီဒေါ်ကြည်ဦး-ကွယ်လွန်ခြင်း
ကိုဇာဂါနာရဲ့မွေးသမိခင်ကြီး ယုဝတီ ဒေါ်ကြည် ဦး ၈၄ နစ် သည်၊ ၂၀-၃-၂၀၀၉ - ည -၈ နာရီမှာ ၁၅ ရောဂါ- လူကြီးရောဂါ ဖြင့်ကွယ်လွန်သွားကြောင်းဝမ်းနည်းဖွယ်သိရပါတယ်။ ကျနော်တို့We Fight We Win Team မှာ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုနှင့်အတူ ထပ်ထူထပ်မျှဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း ဖေါ်ပြလိုပါသည်။
မိခင်ကြီး ဒေါ်ကြီဦးရဲ့ကျန်ရစ်တဲ့ ရုပ်ကလပ်ကို ၂၁ရက်နေ့နေလည် ၁၂ နာရီမှာ ရန်ကုန် စမ်းချောင်းမြို နယ် ရှမ်းကုန်းလမ်း အမှတ် ၅၄ - ၅ လွာ (အေ) နေအိမ်မှ ရေဝေးသုသန်သို့ ပိုဆောင်မီးသကြို မည်ဟု သိရပါသည်။ ကိုဇာဂါနာကိုချစ်စွာသော ပရိပ်သပ်ကြီးမှ လိုက် လံပို့ ဆောင်ပေးကြပါရန် ကျနော်တို့ နိုးဆော် လိုပါသည်။
မိခင်ကြီး ဒေါ်ကြီဦး ရဲ့ ရုပ်ကလပ်ကို အခန်းနားတွေလုပ်တာ၊အခန်းငှားတာ ကို နအဖမှ ခွင့်မပြုပဲ တခါးတည်းမီးသ င်္ဂြုလ် ရမည်ဟု နအဖ အာဏာပိုင်များက ဖိအားပေးထားကြောင်း လည်းသိရပါသည်။ အသုဘချမည့် နေ့ တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ ကို ကျော်သူကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပို့ မည်။ ကျွမ်းကျန်သောရုပ်ကလပ်ကို နေအိမ်တွင်ပင်ထားပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစုများကိုလာ ရောက်အားပေးသူများ၊ ဆရာမကြီးကို ချစ်ခင်သောပရိပ်သပ်များ နှင့် ပြည့် ကျပ်နေသည်ဟု သိရပါသည်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် သံဃာတော်များကိုဆွမ်းကပ်လျူဒန်းမှုကြောင့် ကိုဇာဂါနာ မှာ နအဖ ထောင်ဒဏ် ၅၉ နစ်ပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်းနအဖမှ ထောင်ဒဏ် ၂၅ နစ်ကို လျော့ပေးခဲ့သဖြင့် မြစ်ကြီးနားထောင်တွင် ထောင်ဒဏ် ၃၄ နစ်ကို ကျခံနေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထောင်တွင်းခက်ခဲသော နေထိုင်မှုဘ၀ကြောင့် ကိုဇာဂါနာသည်။ ကိုဇာဂါ နာလည်းကျမာရေး မကောင်းဟုသိရသည်။ အရိုးကြီးပေါင်းတက် ရောဂါ၊ နှလုံးနှင့်သွေးတိုး ရောဂါများခံစားနေရကြောင်း စိုးရိမ်ဖွယ်ကြားသိရပါတယ်။
Source: Ko Moethee blog
BDD is also expressing our condolence for Late Daw Kyi Oo, mother of Ko Zarganar. We understand how he feels that he lost his great mother during this time. And we do proud of his brave heart for the rest of the Burmese people, especially Nargis cyclone victims, and peaceful Buddhist Monks. Hope that SPDC generals would not suffer that we all have been through.
Posted by BURMA DEMOCRACY & DEVELOPMENT at 3/21/2009 12:30:00 PM